“ စီးပွားရေးက အကုန်လုံးလိမ်ပိန်ပြီးတော့သွားနေကြတယ် ” မွန်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရက စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ရာ မည်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဦးစားပေးအကောင်အထည်ဖော်သင့်ခြင်းများကို ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သူ နိုင်မြင့်လွင်နှင့် ဟင်္သာမီဒီယာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေး လိုက်ပါသည်။ ဟင်္သာ။ ။...
Interviews August 4, 2016
"ဆုရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီမလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုလုပ်ခဲ့တာ လုံးဝမရှိပါဘူး" ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဟင်္သာမီဒီယာရဲ့ အနုပညာကဏ္ဍမှာတော့ မော်လမြိုင်မြို့၊ Ocean Supper Center ဇူလိုင်လက ကျင်းပခဲ့တဲ့ Mr & Miss Raining Season 2016 ပြိုင်ပွဲတွင် Winner ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ မွန်အမျိုး သမီးမော်ဒယ်လ်...
Interviews August 3, 2016
“နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ လုံခြုံရေးကိုတော့ အထူးသတိပြုပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်” နိုင်ငံတကာ တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို အဓိက လုပ်ဆောင်နေသောအိုင်အက်စ်(IS)အဖွဲ့က မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများရှိ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တချို့ကို ပစ်မှတ်ထား ကြောင်း စာတစောင်ကို မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့သို့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က ပေးပို့လာကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံ အခြေစိုက်...
အမှန်က ဝန်ကြီးဌာနတွေတွဲကိုင်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ ပြဿနာလေး တွေရှိတယ် မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမင်းမင်းဦး အနေနှင့် အချို့ သော ပြဿနာ များကြောင့် ဝေဖန်မှု များ ခံနေရ သည် ။ ဥပမာ ရက် ၁၀ဝ စီမံကိန်း နှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်...
ဝေဖန်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလို့ပဲမှတ်ယူထားတယ်။ ယခုအပတ်အတွက် ဟင်္သာမီဒီယာရဲ့ အနုပညာကဏ္ဍမှာတော့ မြန်မာဘာသာဖြင့် သီချင်းခွေထုတ်ဝေတော့မည့် မွန်အဆိုတော် စမိုင်းချမ်းနှင့်တွေ့ဆုံပြီးအခွေထုတ်ဖြစ်ပုံနှင့် လတ်တလောလှုပ်ရှားမှု များမေးမြန်းထားသည်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဟင်္သာ။ ။စမိုင်းချမ်း မြန်မာဘာသာနဲ့ သီချင်းခွေထုတ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ဆိုအဲဒါဟုတ်ပါသလား။ စမိုင်းချမ်း။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခွေနာမည်က “လာပြီးညာဖြီး”ဖြစ်တယ်။ အခွေထဲမှာဆိုရင် သီချင်း ၁၁ ပုဒ်ပါတယ်။ ဟင်္သာ။...
“ဌာနဆိုင်ရာတွေက အစိုးရဌာနကသာ သူတို့ကို ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်၊ လွှတ်တော်က ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ မြင်တယ်” မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် သို့ အများပြည်သူ ပို့ ပေးသော တိုင်စာများ ဖြေရှင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန များ ကို လွှတ်တော် ကို ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံစာပေးပို့သော်လည်း အချို့ မှာ...
မွန်ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် အခြား ပြဿနာ များ ဖြေရှင်းရန် လွှတ်တော် နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်ရှိတွင် ပြည်နယ်အစိုးရ ၊ လွှတ်တော် နှင့် ဌာန ဆိုင်ရာ တို့အကြား ပွတ်တိုက်မှုများ...
မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မွန်ပြည်နယ် အတွင်း လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေသော မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ ဖြေရှင်းစရာ ပြဿနာ များ ၊လွှတ်တော် နှင့် အစိုးရ ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် စရာ လုပ်ငန်း များ ကို...
1...11121313 ၏စာမျက်နှာ 12